Kobo Clara HD wuxuu noqdaa kaniini mahadsanid PostmarketOS | Dhamaan Akhristayaasha
Kobo Clara HD wuxuu noqdaa kiniin mahadsanid PostmarketOS
Joaquin Garcia | | Akhristayaasha, Kobo
Akhristayaashu badanaa waxay leeyihiin nolol aad u dheer haddii si wanaagsan loola dhaqmo, laakiin inkasta oo ay noloshan dheer tahay, waxaa imaaneysa waqti ay isticmaalayaashu joojiyaan taageerada iyo iswaafajinta qaabab cusub, barnaamijyo cusub, cusbooneysiin cusub, iwm.
Tani waa waxa ku dhacay qaar ka mid ah moodellada akhristayaasha ee Amazon, Kobo, Onyx Boox, Tagus, iwm.
Laakiin inkasta oo ay jiraan wax walba, waxaa jira mashaariic ku saleysan in nolol cusub la siiyo qalabka. Tani waa kiiska mashruuca PostmarketOS oo nolol siiyay aalado duug ah oo wata Android ama Linux kernel. Mid ka mid ah aaladaha nolosha cusub siiyay waa Kobo Clara HD, Kobo Rakuten eReader oo la soo saaray dhawr sano ka hor laakiin guushii cajiibka ahayd ee ay ka gaadhay shirkadda sii waday inay iibiso.
PostmarketOS waa mashruuc bilaash ah oo ku saleysan qeybinta Alpine Linux gnu / Linux. Qaybintaani waxay diirada saareysaa adeegsiga softiweerka waxay u baahan tahay ilo yar iyo qalab awood yar si ay u rakibaan una shaqeeyaan on qalabka gacanta iyo mobile. Qalabka ugu muhiimsan ee taageera nidaamkan hawlgalka waa taleefannada casriga ah, laakiin hadda waxaa jira dhowr nooc oo kiniinno iyo akhristayaal ah oo iswaafaqsan ama laga yaabo inay leeyihiin PostmarketOS.
Wax ka beddelka ay PostmarketOS ku sameyso Kobo Clara HD kuma jiraan dammaanaddaada, markaa haddii aan hadda soo iibsannay qalabka laguma talin karo in aan sidaa yeelno, ugu yaraan haddii aan ka taxaddarno dammaanadda.
El Kobo Clara HD Waxay ku imaaneysaa qalab Linux ah markaa adoo wax ka bedelaya feylasha qaarkood ee xusuusta qalabka waxaan qalabka u rogi karnaa kiniin leh shaashadda khad elektarooniga ah.
Haddii aan eegno feylka qalabka ee ku yaal PostmarketOS wiki waxaan aragnaa inay weli jiraan cunsurro aan shaqeynin, laakiin waxaa soo baxday in walxahaas lagama heli karo Kobo Clara HD sida kamaradda, wicitaanada ama 3D dardargelinta. Taasi waa in la yiraahdo, waxaan sameyn karnaa rakibida iyada oo aan wax khatar ah u lahayn in cunsur kasta uu joojiyo shaqada.
Gudaha PostmarketOS wiki ayaan ka helnay habka rakibaadda iyo waliba casharradii lagama maarmaanka u ahaa hawlgalkeedii saxda ahaa. Gudaha bakhaarka gitlab kooxda aad horumarinaysid, jetomit ayaa daabacday feylasha lagama maarmaanka u ah rakibideeda.
Horumarkaani maahan kan kaliya ee ka jira eReader. Dhawr sano ka hor ayaan kaala hadalnay Kindleberry Pi, mashruuc loo adeegsaday shaashadda Kindle sida E-kontroolka kormeerka si loogu isticmaalo Raspberry Pi. Marka laga hadlayo Kobo Clara HD, horumariyeyaashu waxay doorteen inay ku rakibaan nidaamka qalabka wax lagu akhriyo, sababta ayaa ah sababta oo ah awoodda qalabkani wuxuu la mid yahay haddii aanu ka badnayn Raspberry Pi kii ugu horreeyay ee lagu sameeyay Kindleberry Pi. anaga cunsuriyada oo aan noqono mashruuca ugu la qaadi karo.
Macno mala samaynayaa in PostmarketOS lagu rakibo Kobo Clara HD?
Abuureyaasha mashruuca midkoodna ma daryeelayno waxa ku dhici kara akhristayaashaada. In kasta oo ay jiraan dad badan oo u raacay warqadda oo ka dhigay mid shaqeeya, waxaa laga yaabaa in khaladaad ay dhacaan oo aqristaha shaqadiisa joojiyo. Sidoo kale ma hayno muuqaal ah barnaamijka Kobo Clara HD, markaa haddii wax qaldamaan ma awoodno inaan dib u laabanno. Taasi waxay tiri, waa inaan isweydiineynaa, maxay tahay faa iidada ku rakibida tan Kobo Clara HD? Waqtiga aan qoreyno tan waa inaan dhahno taas waxay u adeegtaa oo keliya inay lahaato qalab elektaroonik ah oo elektiroonig ah oo yar oo jaban oo aan ku samayn karno waxyaabo yar yar sida hubinta jadwalka taariikhda, hubinta emaylka, iwm. Laakiin ma awoodi doonno inaan daawanno filimada, dhageysanno muusigga, ama aan wax ka beddelno fiidiyowga ama u adeegsanno qalabka aaladda ciyaarta.
Iyadoo la tixgelinayo in wali akhristuhu wali la iibiyay oo uu helayo cusbooneysiin, waxay umuuqataa qalad in lagu rakibo PostmarketOS, si kastaba ha noqotee, sanado yar gudahood, marka qalabku uusan cusbooneysiin, macno ayaa laga yaabaa in la rakibo PostmarketOS oo u isticmaal qalabka inuu noqdo kormeeraha elektarooniga ah ama guddi sare si aad u eegto emaylka ama kalandarka Maxay kula tahay Miyaad ku fulin doontaa jabsigan Kobo Clara HD ama miyaad ku sii hayn doontaa akhriste ebook fudud? Miyaad u maleyneysaa in akhristayaashu ay yeelan doonaan nolol labaad sida darfaha khad elektarooniga ah?
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhammaan akhristayaasha » hardware » Akhristayaasha » Kobo Clara HD wuxuu noqdaa kiniin mahadsanid PostmarketOS
Kindle Paperwhite Saxeexa Saxeexa, akhristaha cusub ee si qalad ah u daadanaya
Kindle Vella, waa adeeg cusub oo ka socda Amazon oo loogu talagalay dadka jecel akhriska